~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: October 2012
25/10/2012; 11:15AM; GMT+8 To Continue Reading
Posted by witch83 at 11:16 AM No comments:
"စွန့်လွှတ်ခြင်းဟာလည်း အနုပညာပါပဲ"လို့ ဖြေတွေးရင်း....
လွမ်းလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို ဝမ်းသာပါတယ်လေ။
မချစ်တတ်သူလို့ စွပ်စွဲမှာကိုတော့ စိုးကြောက်မိတယ်လေး။ ။
23/10/2012 ( 12:25PM; GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:30 PM2comments:
chocothazin ရေးထားတဲ့ For the rest of my life ဆိုတဲ့ ပို့(စ်)ကို ဖတ်ပြီး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ Tagged post တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ ရေးထားတဲ့ပို့(စ်)မှာ comment ပေးပြီး ရေးချင်သွားလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ် ရေးမယ်ဆိုတော့လည်း နည်းနည်း ခက်ပါတယ်။ သူရေးပြီး တော်တော်ကြာမှ ရေးလို့ပြီးတယ်။ ရေးမဲ့ရေးလိုက်တော့လည်း မရည်ရွယ်ဘဲ တော်တော်.. ရှည်သွားပါတယ်။ :)
(၁) For the rest of my life ( ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကိုယ့််ရဲ့ဘဝအတွက်)
အခုလက်ရှိအချိန်မှာ Stable life တစ်ခုရဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေပေမဲ့ for the rest of my life ဆိုတာ သိပ် မတွေးမိပါဘူး။
ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်ရ... အလုပ်မှာ အသားကျအောင် ကြိုးစား.... ကြွေးဟောင်းတွေဆပ်။ ကြွေးသစ်ကတော့ ~~~~~~!
ရုန်းရင်း၊ ကန်ရင်းနဲ့ အလုပ်မှာ အသားကျလာ။ နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ အခြေကျလောက်ပါပြီလို့ မျှော်လင့်ခဲ့။ အဲ့ဒီနောက်.. ထပ်မျှော်လင့်တာက လခတိုးရဖို့၊ permanent stay လေးရဖို့၊ ရာထူးတို့ဖို့ဆိုတာက ဒီကုမ္ပဏီမှာ သိပ်မဖြစ်နိုင်တော့ ဒီထက် တက်လမ်းရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကို နှစ်နည်းနည်းကြာတဲ့အခါ ပြောင်းဖို့၊ ............. ၊ တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ဖို့.....။ ။
ရေတို၊ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေရှိနေပေမဲ့... အဲ့ဒါတွေက သေချာတွေးကြည့်ရင်တော့ ရုပ်ဝတ္ထု ခပ်ဆန်ဆန်ရယ်။ ပြီးတော့.. နည်းနည်းလည်း လောဘကြီးနေသလားလို့။ :)
နောက်ပြီး... ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆိုတာကို သေချာ တွေးကြည့်လိုက်တော့.... ဘယ်အရာကမှ မသေချာတော့သလိုလို။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူဆိုတာက မနက်ဖြန် ကိုယ်... ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတောင် သိနိုင်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အချိန် ဘယ်လောက်ကျန်မှန်းလဲ မသိနိုင်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်ကျော်က မှော်ဘီမှာ တရားစခန်းဝင်တုန်းက သတ္တမရံသီဘုန်းဘုန်းဟောသလိုပေါ့ ... လူဆိုတာ ကိုယ် ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်ရောဂါ၊ ဘယ်ပုံစံနဲ့သေရမယ်မှန်းမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။
(စကားချပ်။ ။ ဘုန်းဘုန်းဟောတာကတော့ မသိနိုင်ခြင်း (၅)မျိုးပါ။ ဘယ်ဘဝကို ရောက်မယ်ဆိုတာလည်း မသိနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီ ပို့(စ်)နဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်လို့ အပေါ်က စာကြောင်းမှာ မထည့်ထားပါဘူး။)
ဒါပေမဲ့လည်း ဘဝဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ဘယ်အချိန်သေမယ်မှန်း မသိနိုင်ဘူး။ ကွေးသောလက်မဆန့် မီ... ဆန့်သောလက် မကွေးမီဆိုသလို.. တရားသွားအားထုတ်မယ်၊ လောကီကိုစွန့်ပြီး လောကတ္တရာပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးကလည်း မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိနေသရွေ့ တော့ လက်ကျန်ဘဝကို ဘယ်လို ရှင်သန်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
(၂) ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို ဘယ်လို ရှင်သန်နေထိုင်သွားချင်သလဲ??
ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကတော့ Soical, family, personal နဲ့ working life ကို မျှမျှတတ၊ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာပါ။ အဲ့ဒီတော့ လက်ကျန်ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာကလည်း ဒါပါပဲလို့ အလွယ်ကူဆုံး ပြောရင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဘဝကိုရဖို့ ဘယ်လို နေထိုင်သွားရင် ကောင်းမလဲ။ အောက်ကနည်းလေးတွေဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်မလားပဲ။
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ဓါတ် ရင့်ကျက်ချင်ပါတယ်။ grow old မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ grow up ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးကြီးလို တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့တော့ မနေချင်ပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ပြုမူပြောဆိုနေထိုင်ပြီး အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ ရင့်ကျက်ချင်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကိုလည်း ရင့်ရင့်ကျက်ကျက်၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
Sleep without regrets & bad feelings
"Never go to sleep angry because you never know if the person you're mad at will not wake up the next day." တဲ့...
မကြာသေးခင်ကမှ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ဖူးတာပါ။ ကျမကတော့ ဒီစာကြောင်းကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ "Never go to sleep with regrets & bad feelings because you are not sure if you will wake up the next day. Haveasound sleep." လို့... ဟုတ်တယ်လေ.. မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာတဲ့ဘဝမှာ အိပ်ခါနီးကြီးကို ဘာလို့ စိတ်တိုဒေါသထွက်နေမလဲ။ နောက်ပြီး အိပ်ခါနီးမှာ ဘာကိုမှ မတွေးတာ ကောင်းပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် sound sleep ဆိုတာကို 80%လောက်တော့ ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီး နောက်နေ့ မနက်အိပ်ရာက နိုးမထနိုင်တော့ရင်တောင်မှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ ဘဝကို အိပ်စက်ခွင့်ရမှာပေါ့။
Work to Learn first; Work to Earn comes later
"When you are young, work to learn, not to earn" လို့ Robert Kyiosaki ကဆိုပါတယ်။ ပြောရရင်တော့.... ကျမ မငယ်တော့ဘူးဆိုတာ ကျမကိုယ်ကျမ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းပညာပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်သိရှိမှုနည်းသေးတဲ့အတွက် ကျည်ပွေ့အတက်ပေါက်ချင်တယ်ဆိုဆို ... အခုလက်ရှိအချိန်မှာ work to learn ပဲ လုပ်ချင်ပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီမှာ ရာထူးတက်ဖို့ ခက်ပါတယ်ဆိုတာကို အရှေ့မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ policy ကြောင့်ပါ။ သူတို့က လူကို ခန့်မယ်ဆို ဘွဲ့နဲ့ လုပ်သက်ကို ကြည့်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေ မကြည့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ management style က flat triangle ဆိုပေမဲ့ တြိဂံကြီးက ပြောင်းပြန်ကြီးပါ။ မန်နေဂျာများပြီး executive နည်းတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားနဲ့ ဗီယက်နမ် (၃)နေရာပေါင်းရင်တောင် Executive level staff နည်းနည်းလေးပဲ ရှိပါတယ်။ ( HQ မှာတော့ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး။) အဲ့ဒီတော့ စင်္ကာပူမှာ ကိုယ့်မန်နေဂျာထွက်သွားရင်တောင် ရာထူးတိုးဖို့က လုပ်သက်အရ တိုးဖို့မလွယ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပညာအရမ်းရတဲ့အတွက် လုပ်နေတာပါ။ "Work to Learn" အတွက်ပါ။ "Work to Earn" နဲ့ "Work to getaposition" ကတော့ နောက်မှ လာပါမယ်။ :)
လူမှုရေး၊ မိသားစုအရေး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာ၊ personal life နဲ့ professional life အာလုံး balance ညီအောင် ညှိပြီးလုပ်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာအောင်လည်း တော်တော်ကြီးကို ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
Try to look things from optimistic angle
နောက်တစ်ခုဖြစ်ချင်တာကတော့ အကောင်းဘက်ကကြည့်တတ်တဲ့ စိတ်ကလေး တစ်ခု ရှိချင်တာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဘဝအကြောင်းကို သိပ်မသိပါဘူး။ စိတ်က ဖြူစင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို၊ လူတွေအားလုံးကို အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ခုတော့ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း အရောင်ပြောင်းလဲလာတာ... တစ်ခုခုဆို မကောင်းတဲ့ဘက်က မြင်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ကို သူ...အသုံးချနေပြီ။ ခိုင်းစားတော့မယ်။ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလာလောင်းနေပြီ။ ကိုယ့်ဆီက အခွင့်အရေး ယူနေပြီ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေ သူ လုယူနေပြီ.... စသဖြင့်ပေါ့။
လူတွေကိုလည်း သံသယ အရမ်း ထားတတ်လာပါတယ်။
အဓိကကတော့ အကောင်းမြင်တတ်ဖို့ပါပဲ။ ပြဿနာတစ်ခုကို တခြား ကောင်းတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်တတ်ဖို့ပါပဲ။ အဲ့လိုဆိုရင် လောကကြီးက ပိုနေချင်စရာကောင်းလာပြီး ကိုယ်တွေရဲ့စိတ်လည်း ပိုငြိမ်းချမ်းလာမယ် ထင်ပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရရင် .. ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမဟာ over-confident ပါ။ ကျောင်းတက်နေတုန်းကို... :) ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့တလျှောက်မှာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရတာမို့... အတန်းဖော်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုနဲ့ ဆရာတွေရဲ့ ချီးကျူးမှု ၊ မိသားစုရဲ့ မြှောက်စားမှုတွေကို ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာလည်း သာယာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဝီရိယလည်း လျှော့ပေါ့ခဲ့ပါတယ်။ ( ပျင်းတတ်တာလည်း ပါတာပေါ့လေ။) ဖြစ်သင့်သလောက်လည်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မူလတန်းကျောင်းသေးသေးလေးမှာတက်တုန်းကတောင် တစ်ခါမှ ပထမ မရဘူးပါဘူး။ ဒုတိယ၊ တတိယနဲ့ပဲ လည်ပတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမမေမေနဲ့ အဒေါ်တွေဟာ ပထမ..မရ.ရကောင်းလားလို့ အပြစ်မတင်ဘဲ ကျမကို ချီးမြှောက်လေ့ရှိပါတယ် (ချီးမြှောက်သင့်တာထက် ပိုပါတယ်)။ မူလတန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားကို ခုချိန်ထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ " xxxxx အိမ်က... တော်တော် လုပ်ပေးတယ်နော်။ ပထမရရင် ဘယ်လိုများ လုပ်ပေးမလဲမသိဘူး။ နင်.. ပထမရအောင်လုပ်ပါလား" တဲ့။
အထက်တန်းကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ (၇)တန်းလောက်ထိက စာသိပ်မကြိုးစားတဲ့သူ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့... အိမ်ကလူကြီးတွေက သိပ်.. အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ (၈)တန်း၊ (၉)တန်းလောက်မှသာ စာပြန်လုပ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဆင့်(၁)ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှသာ ချိတ်သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ အဆင့်တွေနဲ့ roll ခွဲတော့လည်း roll-1 ဆိုတာ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမရတဲ့ ဒီ (3) (4) ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲ ကျမ မိသားစုက ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ( ဒီနေရာမှာ ကျေးဇူးတင်ချင်တာက ကျမကို ဘယ်တော့မှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အပြစ်မတင်ခဲ့တာကိုပါ။ တကယ်ဆို ကျမရဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ အဆင့် (၁) ရခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်တွေပါ။ )
နည်းနည်းလေးအဆင့်ကောင်းရင်ကို ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ ကျမ မိသားစုကြောင့် ကျမဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွတ်အထင်ကြီးတတ်တာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းဘူးထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက်လည်း ရတတ်တာမို့ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်... လုပ်နိုင်တယ် ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်ထဲဝင်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ဝင်ခါစမှာ ကိုယ်သိခဲ့တာ၊ သင်ယူခဲ့တာတွေနဲ့ ... ကိုယ်လုပ်နေရတာ မတူတာမို့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှသာ အဆင်ပြေသွားတာပါ။ အလုပ်ထဲဝင်ချိန်ရောက်မှသာ ... သီအိုရီသမားနဲ့ လက်တွေ့သမား ဘယ်လိုကွာတယ်။ working experinece ဆိုတာ ဘာဆိုတာကို သဘောပေါက်ခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရှေ့ က senior တွေနဲ့  လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေက တော်တော်ကြီး... တော်ကြ၊ သိကြ၊ တတ်ကြတာကို မြင်တော့ ... သြော်... ငါ...အများကြီး လိုသေးတာပါလားဆိုတာကို သိလာရပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ အားငယ်စိတ်တွေ ဝင်..ဝင်လာတာပါပဲ။
ဒီမှာ အလုပ်ဝင်တော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ HQ ကလူတွေက exp ရှိတဲ့အပြင် well-trained တွေမို့ တော်တော် သိကြ၊ တတ်ကြပါတယ်။ training သွားတက်ရင်လည်း အော်စီ၊ ရုရှား၊ တောင်အာဖရိက ကလူတွေဆို တော်တော် တော်ကြပါတယ်။ ကျမနဲ့ တွဲရတဲ့ဗီယက်နမ်လေးဆိုလည်း အရမ်း တော်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတစ်ချို့ ဆိုလည်း တော်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း တစ်ခါတစ်ခါ အားငယ်စိတ်တွေ ဝင်လာတတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ လျော့လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် "work to learn" လုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ self-confidence ကို ပြန်တင်ရပါဦးမယ်။ Self-Confidence is your beauty တဲ့ ... ဒါပေမဲ့... များလွန်းရင် အထိနာတတ်သလို.. နည်းလွန်းရင်လည်း မလိုအပ်ဘဲ ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။
ကျမဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သိပ်မခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင် ပွင့်လင်းတဲ့သူ၊ ရိုးသားတဲ့သူလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယူဆပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်အမှားကိုဖုံးပြီး သူများကို စွတ်.. အပြစ်မတင်တတ်ပါဘုး။ ကိုယ်မရှိတာကို မရှိဘူး၊ မသိတာကို မသိဘူးလို့ ထုတ်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကို ကျမနဲ့ တကယ် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ သိကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ .. တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကျမဟာ ခံစားချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင်၊ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင်... ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိမ်တတ်ပါတယ်။ မြိုသိပ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ဂရုမစိုက်ပဲနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်တိုအောင်.. ဝမ်းနည်းအောင် လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝမ်းနည်းတာကို ထုတ်မပြဘဲ ဘာမထီပုံ လုပ်ပြတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တာကိုလုပ်ရင်လည်း ထုတ်မပြောဘဲ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ ပြတတ်ပါတယ်။ တချို့  ကိစ္စတွေဆို ထုတ်မပြောဘဲ ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတတ်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ ဘယ်သူမှ မသိဘဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပင်ပန်းလာပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ကျမ... ဒီထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ပွင့်လင်းနိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ People slip the view when you are closer to them တဲ့။ နီးလွန်းရင် မမြင်တတ်တာ မဆန်းပါဘူး။ မြင်အောင်၊ သိအောင် positive wayနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ထုတ်ပြောရမှာကတော့ ကျမတာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်း.... short to the point ရေးဖို့ စဉ်းစားထားပေမဲ့ ရေးလိုက်တော့ moodဝင်သွားပြီး စကားများသူတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပို့(စ်) ရှည်သွားပါတယ်။ မြန်မြန်လေး အဆုံးသတ်ရပါစေ။ :P
ဒီအပေါ်ကအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်တော့ တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ နိုင်ငံအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုးလို့ အော်မနေဘဲ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးရှိအောင် နေထိုင်သွားချင်ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း သူ့အကျိုး၊ ကိုယ့်အကျိုးကို မျှမျှတတလုပ်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာထိ ရောက်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ တော်တော်လည်း ရှည်သွားပြီမို့ ဒီပို့(စ်)လေးကို ဒီနေရမှာ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။း)
(18/10/2012; 12:05 PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 12:05 PM3comments:
Posted by witch83 at 2:33 PM6comments:
Posted by witch83 at 11:53 AM No comments:
မင်္ဂလာ တနလာင်္နေ့ပါ။ " ဟင်းချက်ဖြစ်တဲ့ သောကြာနေ့ည " post လေးတင်ချင်ပါတယ်။ ဖတ်ပေးကြပါဦး။ :)
စင်္ကာပူရောက်ပြီး full-time စလုပ်ကတည်းက အီဖေကိုယ်အတွက်တော့ သောကြာနေ့ညနေဆိုတာ တန်ဖိုးထားစရာတစ်ခုလို အလိုလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်၊ shopping ထွက်ရင်ထွက်၊ အပြင်မှာ မုန့်ထွက်စားရင်စား၊ အဲ... အပြင်မထွက်ဖြစ်ရင်တော့ take away food ဝယ်လာပြီးစား၊ ဟင်းချက်ရင်လည်း လွယ်ပြီးမြန်မြန်ကျက်တဲ့ ရှုးရှဲ soup ချက်စားတတ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ သီချင်းနားထောင်..အဲ.. ခု..နောက်ပိုင်းတော့ NTUC က punch အချိုရည်လေးလည်း သောက်တတ်လာပါတယ်။ ဟဲ.. ဟဲ...
သောကြာနေ့ဆို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အိမ်မှာ ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲ သက်တောင့်သက်တာနေချင်တာ အကျင့်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သောကြာနေ့၊ စနေနေ့ညနေဟာ ညီမဖြစ်သူ အပြင်ထွက်နေကျမို့ ကျမအတွက်တော့ တစ်ယောက်တည်း နားအေးပါးအေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေရတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ... ကျမရဲ့ ညီမဖြစ်သူဟာ အင်မတိအင်မတန် အပျော်ကြိုက်သောသု၊ ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အမြဲ up ဖြစ်နေသောသူ၊ အိမ်မှာရှိနေရင် အင်မတန် အသံထုတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လို သူက စကားမများပေမဲ့၊ မပျော်တဲ့.. အလုပ်နဲ့ အပြင်မှာ အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်မပြောဘဲ မြိုသိပ်ထားတတ်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ သူက ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ အသံ ပြန်ထုတ်တယ်ထင်ပါတယ်။ သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးကရင်က၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကာရာအိုကေဆို... အဲ.. အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့် အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတတ်ပါတယ်။ ဗမာကားတစ်ချို့ဆို သူ.. ဖွင့်သာဖွင့်ထားတာ သေချာ မကြည့်ပါဘူး။
သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ကိုယ်ကတော့ မကျေနပ်တာ၊ စိတ်တိုလာတာတစ်ခုရှိပြီဆို တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြလိုက်ရမှ။ အိမ်က အမေနဲ့ အဒေါ်တွေဆို တော်တော် နားငြီးတာ။ အင်း... အဒေါ်တွေက ပို... နားငြီးမယ် ထင်ပါတယ်။ အမေလုပ်တဲ့သူကိုတော့ သူ. စိတ်ရှုပ်မှာစိုးလို့ တချို့ ဟာတွေကို မပြောပါဘူး။( တော်တော် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တူမနော်။) အဲ့လို အပြင်က မကျေနပ်တာတွေကို အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အမြဲ ဖွင့်ထုတ်ပြောလေ့ရှိတဲ့ ကျမဟာ ပြောပြီးသွားရင်တော့ အိမ်မှာ နားအေးပါးအေးနေချင်ပါတယ်။ အဲ..အဲ.. အတင်း ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့  ခေါင်းစဉ်လွဲတော့မယ်။ သောကြာနေ့အကြောင်း ပြန်ဆက်ပါ့မယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနေရတဲ့ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့.. သောကြာနေ့ညနေဟာ ကျမအတွက်တော့ ဘာမှ မလုပ်တဲ့နေ့ပါ။း) ဒါပေမဲ့ ရုံးအပြန်မှာတော့ NTUC မှာ ဈေးဝင်ဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစားအသောက်ကြိုက်တဲ့ ကျမဟာ ကြားရက်တွေဆို မချက်တာများပေမဲ့ အပြင်မထွက်ဖြစ်တဲ့ စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေဆိုရင် တစ်ခုခု လုပ်စားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုတစ်လော ဆက်တိုက် ချက်သလိုဖြစ်နေလို့ ... တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့  မွေးနေ့ပွဲလည်းရှိ၊ ညနေမှာ သူငယ်ချင်းအိမ်ပြောင်းတာကူဖို့လည်းရှိ၊ ပြီးတော့ ဖရီဇာအပေါ်ခန်းမှာ ခဲထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလည်းရှိတာကြောင့် ဒီတစ်ပတ်တော့ မချက်တော့ဘုးလို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ သောကြာနေ့ညနေမှာ ဟင်းချက်ဖို့ဆိုတာ ပို.. ဝေးပေါ့။ သို့သော်လည်း .. :P
ဒီတစ်ပတ် သောကြာနေ့ညနေ... ဈေးဝင်ဝယ်တာ ပေါင်မုန့်နဲ့ ဖျော်ရည်၊ ဘုရားပန်းနဲ့ အသီးဝယ်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Friday evening နဲ့ Saturday morning တွေမှာ ပုံမှန်ဆိုမကျန်တတ်တဲ့ ဝက်လက်အသားကောင်းကောင်း၊ နှလုံး၊ အသည်းနဲ့ တခြားဝက်ကလီဇာတွေကို ထူးထူးခြားခြား သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Friday evening ပေမဲ့ ဟင်းချက်ဖို့စိတ်ကူး ရသွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ... ဝက်လက်တစ်ချောင်း၊ ဝက်နှလုံးတစ်ခု ဝယ်လိုက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့အတူ ပဲပြား၊ pork stwed powder, နာနတ်ပွင့်၊ ကြက်ဥ၊ baby kailan တို့ကို ဝယ်ရပါတော့တယ်။ ကြံမဆိုင်ကတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ကျန်သေးတာမို့ မဝယ်ခဲ့ပါဘူး။ နားချင်တဲ့ သောကြာနေ့ညနေမှာ ဟင်းချက်ရမှာဆိုပေမဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ အရင်သောကြာနေ့တွေနဲ့မတူ ခြေလှမ်းတွေ ပေါ့ပါးနေပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ (၈)နာရီစွန်းစွန်းရှိနေပါပြီ။ ဗိုက်ကလည်း ဆာတာတာမို့ ဒိန်ချဉ်ဖျော်ရည် တစ်ခွက်သောက်... ပြီးတော့.... အကျီ င်္လဲ၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ အသားတွေဆေးပြီးတော့ ဝက်နှလုံးကိုတော့ အလုံးအတိုင်း၊ ဝက်လက်ကိုတော့ အတုံးအသေးပြန်တုံး... ဆား၊ချင်းမှုန့်၊ စတူးပေါင်ဒါမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်နှစ်ဇွန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူအစိတ်သေးသေးလှီးထားတာလေးတွေနဲ့နယ်ပြီးနှပ်၊ ဆန်ဆေးပြီး ထမင်းချက်... အဲ့ဒီ အချိန်မှာ (၈)နာရီခွဲ ကျော်ပါပြီ။
ထမင်းအိုးခလုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ unknown call တစ်ခု ဝင်လာပါတယ်။ အိမ်ကထင်ပြီး ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေပါတယ်။
သူနဲ့ပြောပြီးတော့ ထမင်းကျက်နေပါပြီ။ ထမင်းတွေကို ပန်းကန်လုံးထဲပြောင်းထည့်၊ ထမင်းအိုးကို ရေစိမ်၊ ကြက်ဥကို အခွံခွာ၊ ပဲပြားကို တစ်တုံး ရှစ်စိတ်လှီး၊ rice cooker ကိုဆေး၊ အိုးဆေးပြီးတော့ မီးဖိုပေါ်တင်အပူပေး၊ ဆီ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲထည့်၊ ဆီပူလာတော့ သကြားထည့်ပြီးမွှေ၊ ကြက်သွန်ဖြူတစ်ပြားရိုက်ထည့်ဆီသတ်၊ နာနတ်ပွင့် လေး၊ငါးပွင့်ထည့်၊ နှပ်ထားတဲ့အသားနဲ့လှိမ့််ပြီး အသားလေးတွေတင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ ရေထည့်ပြီး ricer cooker အခွံထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။
rice cooker ခလုတ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကြံမဆိုင်ကိုလှီး၊ ခဏနေတော့ ကြက်ဥပြုတ်တွေ ဟင်းအိုးထဲထည့်၊
လှီးထားတဲ့ ကြံမဆိုင်နဲ့ ပဲပြား
ဟင်းနံ့ကလည်း မွှေးလာ...( ၉)နာရီကလည်း ကျော်ပြီ... ဗိုက်ကလည်း အရမ်းဆာလာတာနဲ့ နွားနို့တစ်ခွက်သောက်၊ ဟင်းကျက်ခါနီးတော့ လှီးထားတဲ့ ကြံမဆိုင်နဲ့ ပဲပြားထည့်၊ (၉း၃၀)လောက်မှာတော့ ဟင်းကျက်ပါပြီ။ ဗိုက်လည်း အရမ်းဆာနေပြီမို့ ကိုက်လန်လည်း မကြော်တော့ပါဘူး။
ထမင်းဟင်းခူး .... ထုံးစံအတိုင်း မစားခင် ဓါတ်ပုံရိုက်၊ စားနေရင်း FB ပေါ် ဓါတ်ပုံတင်.. စားပြီး အိုးခွက်ဆေး။ FB ပေါ်တက်... Reply ပြန်... သူငယ်ချင်းဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး အတင်းပြောပြီး (၁)နာရီလောက်မှာတော့ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
စနေ နေ့လယ်ခင်းတုန်းက ရိုက်ထားတာ... :)
နောက်နေ့ စနေနေ့ အပြင် မထွက်ဖြစ်တာမို့ ချက်ထားတဲ့ ဝက်လက်ဟင်းချိုကို တနေကုန် ခဏခဏ စားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ အထူး ပြောပြဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ရှင်။
ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
WITCH 83 ( 01/10/2012; 12:32PM; GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:40 PM 1 comment: